160W Ọkwọ ụgbọala na-acha ọkụ mmiri China Manufacturer
Nkọwa:Led Street Light Driver,UL edepụtara IP67 LED Driver,Ọkwọ ụgbọala dị na Aluminium
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;ahịa > Ọkụ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ n&#39;okporo ámá > 160W Ọkwọ ụgbọala na-acha ọkụ mmiri
160W Ọkwọ ụgbọala na-acha ọkụ mmiri
Ihe Nlereanya.: FD-160H-054
FD-160H-054, nke a kwadoro maka ọkụ ọkụ Windows, na-eme ka ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ, iji rụọ ọrụ ọhụụ n'èzí. Flickr na-aga n'ihu ugbu a n'efu 0-10V / PWM / RX dimming, na elekere 160W, UL, FCC, na-erubere CE, nkwụpụta voltage dum nke IP67 design waterproof. Na nkeji dị mma maka iduzi ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 100-277V , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C, gafee akụkụ dum nke unit ahụ.
Ụdị njirimara nke ọkwọ ụgbọala ọkụ a na-agụnye circuit dị mkpirikpi, n'elu ibu, n'elu voltaji & n'elu nchebe okpomọkụ ma mejupụta unit iji izute TUV, EN61347-1, EN61347-2-13 na emmisions na EN 55105, EN61547.
· PFC dị elu
- Aluminom ikuku ada ọkwọ ụgbọ ala
• Ọpụpụ otu ọwa, mmepụta ọkwa ugbu a họrọ.
· Voltage ọsọ ọsọ 100VAC ~ 277VAC
· Ọrụ dị elu ruo 90%
Ọrụ arụ ọrụ PFC n'ọrụ
• 100% mmepụta ntinye akara mgbaàmà, nwere ike iji dị ka ike ọkọnọ
Nchebe: Mkpirikpi oge, n'elu ibu, n'elu voltaji & nchebe nchebe
· Kwesịrị ekwesị maka ngwa ọkụ ọkụ ime ụlọ
OEM & ODM nabatara.
Ụgwọ ihe nlele: enwere ike ịchọta ihe n'ime ụbọchị ise.
Ọdịdị dị elu, ụdị zuru oke, ezigbo nkwụsi ike, ike ime.
Ezi ọrụ na-azụ ahịa na-arụ ọrụ na-akwado.
Ike nchekwa, ogologo oge na-eji ndụ.
Kwekọrọ na usoro nke Crestron, Philips, Osram, Lutron, Dynalite, Clipsal, LDS, ABB, Schneider, Leviton, JUNG, Berker, Be Lichtregler, wdg.
A na-ejikarị ya eme ihe na nkwari akụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, ahịa, ụlọ, n'èzí, ime ụlọ, ụlọ nzukọ, ọgbọ, wdg.
Voltage mmepụta: 36-54V
Max. Mgbatị mmepụta: 160W
Max. Mmepụta ugbu a: 3600mA
FD-160H-054, UL edepụtara IP67 Ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala na-adịgide adịgide mgbe niile , Flicker free 0 / 1-10V / PWM / RX dimming, Wụnye mgbanaka okporo ụzọ, Desigen maka ọkụ dị ọkụ Epeepe ọkụ na-acha ọkụ. Ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ume. Ejiri Aluminom rụọ ụlọ ya, ntinye onwe ya maka usoro njikọ njikọta ya, nke kwesịrị ekwesị maka ahịa Europe na North America.
150W LED Linear High Bay Power Supply Kpọtụrụ ugbu a
Uwe Okpukpu Uhie Ohu Mmiri 100W Voltage Constante Kpọtụrụ ugbu a
LED Linear High Bay Lights Driver 30W Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Leta Dimkpable LED Driver IP67 Kpọtụrụ ugbu a
Led Street Light Driver UL edepụtara IP67 LED Driver Ọkwọ ụgbọala dị na Aluminium Led Street Lights Driver Ac Led Street Light Driver UL Street Lights Driver Street Light Driver LEDs Street Light Driver